जेम्स को पत्र – 2माछा
घर / बाइबल / Epistles / जेम्स को पत्र
1:1 याकूब, परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको दास, तितरबितर को बाह्र कुल गर्न, सलाम.
1:2 मेरो भाइहरूलाई, जब तपाईं विभिन्न परीक्षाहरू मा खसेको छ, एक आनन्द सबै विचार,
1:3 आफ्नो विश्वासको साबित धैर्य अभ्यास भनेर थाह पाउँदा,
1:4 र धैर्य सिद्ध काम दिन्छ, तपाईं सिद्ध र सारा हुन सक्छ भनेर, केही मा कमी.
1:5 तर तपाईं बीच जो कोहीले बुद्धिको आवश्यकता छ भने, उहाँलाई परमेश्वरको आवेदन दिनुहोस्, जो निन्दाले बिना सबै प्रशस्त मात्रामा दिन्छ, र उसलाई दिइएको गरिनेछ.
1:6 तर उहाँले विश्वास सोध्नुपर्छ, केही शङ्कालु. उहाँले कसले संदेह सागर मा एक लहर जस्तै छ, जो हावा द्वारा बारेमा सारियो र दूर छ;
1:7 त्यसपछि एक मानिस उहाँले प्रभु देखि केहि प्राप्त हुनेछ भन्ने विचार हुँदैन.
1:8 दुई मन छ मानिस को लागि आफ्नो सबै मार्गमा inconstant छ.
1:9 आफ्नो exaltation महिमा अब नम्र भाइ गर्नुपर्छ,
1:10 र एक धनी एक, आफ्नो अपमान मा, उहाँले घाँस को फूल जस्तै टाढा पारित गर्नेछ.
1:11 सूर्य लागि scorching गर्मी संग पुगेको छ, र घाँस सुकेको छ, र यसको फूल बन्द खसेको छ, र यसको सौन्दर्य को उपस्थिति perished छ. त्यसैले पनि धनी एक सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो हुनेछ, आफ्नो बाटो अनुसार.
1:12 अनमोल प्रलोभनको पीडित मानिस छ. उहाँले सिद्ध गरिएको छ जब लागि, उहाँले जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नेछ.
1:13 कुनै एक भन्नुपर्छ, उहाँले परीक्षा गर्दा, उहाँले परमेश्वरको प्रलोभनमा थियो. परमेश्वरको दुष्कर्मलाई तिर लोभ्याउन गर्दैन लागि, र उहाँले कुनै एक लोभ्याउँछ.
1:14 यद्यपि साँच्चै, प्रत्येकले आफ्नै इच्छा प्रलोभनमा छ, फस्यो र टाढा आएको होने.
1:15 त्यसपछि, जब इच्छा गर्भधारण छ, पाप जन्माउँछ. अझै साँच्चै पाप, जब यो consummated गरिएको छ, मृत्यु उत्पादन.
1:16 अनि त, हराउनु जाने चयन छैन, मेरो सबै भन्दा प्रिय भाइहरू.
1:17 हरेक उत्कृष्ट उपहार र हरेक उत्तम उपहार माथिबाट छ, रोशनी को पिता देखि घट्दो, जसलाई कुनै परिवर्तन छ, हेरफेर को न त कुनै पनि छाया.
1:18 आफ्नै इच्छा द्वारा लागि उहाँले सत्य वचन हामीलाई उत्पादन, हामी आफ्नो प्राणीहरू बीचमा सुरुमा एक प्रकारको हुन सक्छ भनेर.
1:19 तपाईंले यो थाहा, मेरो सबै भन्दा प्रिय भाइहरू. त्यसैले हरेक मानिस सुन्न द्रुत होस्, तर बोल्न र रिस गर्न निकै ढिला ढिलो.
1:20 लागि मानिसको रिस परमेश्वरको न्याय पूरा गर्दैन.
1:21 किनभने यो, सबै अशुद्धपन र अरुको अहित गर्ने इच्छा को एक प्रशस्त टाढा डाली भएको, नम्रता भर्खरै-grafted शब्द संग प्राप्त, जो आफ्नो प्राण बचत गर्न सक्षम छ.
1:22 त्यसैले शब्द को doers हुन, र श्रोताहरू मात्र, धोका आफूलाई.
1:23 कसैले शब्द को एक श्रोता छ भने लागि, तर पनि एक doer, उहाँले एक मानिस उहाँले संग जन्मेको अनुहार ऐना मा नरहन तुलना छ;
1:24 र पछि आफूलाई विचार, उहाँले टाढा गए र उहाँले देखेका थिए के द्रुत भूल.
1:25 तर उहाँले गर्ने स्वतन्त्रता को सिद्ध व्यवस्थामा मा gazes, र यो मा जो रहिरहन्छ, एक बिर्सने सुन्नुहुने छ, काम तर यसको सट्टा एक doer. उहाँले गर्छ के मा आशिष् गरिनेछ.
1:26 तर जो कोहीले ठान्नुहुन्छ भने आफूलाई धार्मिक हुन, तर उहाँले आफ्नो जिब्रो रोक्न छैन, तर यसको सट्टा आफ्नै हृदय seduces: यस्तो कसैको धर्म व्यर्थ छ.
1:27 यो धर्म हो, सफा र परमेश्वर पिताको अघि undefiled: आफ्नो सङ्कष्ट अनाथ र विधवाहरूलाई भ्रमण गर्न, र आफैलाई बेदाग राख्न, यो उमेर देखि अलग.
2:1 मेरो भाइहरूलाई, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमाको विश्वास भित्र, व्यक्ति तिर favoritism देखाउन चयन छैन.
2:2 एक मानिस एक सुन घन्टी र भव्य परिधान भइरहेको आफ्नो विधानसभा प्रवेश गरेको छ भने लागि, र एक गरिब मानिस पनि प्रवेश गरेको छ भने, फोहोर भेषमा,
2:3 र तपाईं त उत्कृष्ट परिधान मा ढाकिएको छ जो एक ध्यान भने, त्यसैले तपाईं उहाँलाई भन्न कि, "तपाईंले यो राम्रो ठाउँमा बस्न सक्छ,"तर तपाईं गरिब मानिसलाई भन्न, "तपाईं त्यहाँ भन्दा खडा,"वा, मेरो पाउदान तल "बस्नुहोस्,"
2:4 तिमीहरू भित्र न्याय छैन, र तपाईं अन्यायपूर्ण विचार संग न्यायाधीशहरूले भएका छन् छैन?
2:5 मेरो सबै भन्दा प्रिय भाइहरू, सुन्न. परमेश्वरको परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भन्ने विश्वास र राज्यको राजकुमार मा धनी हुन यो संसारमा गरिब रोजेको छैन?
2:6 तर तपाईं गरिब dishonored छ. छैन धनी भएको जसले तपाईंलाई शक्ति मार्फत दमन हुन्छन्? र तिनीहरूले जसले तपाईंलाई न्याय तानेर हुन्छन्?
2:7 छैन तिनीहरूले तपाईंलाई भन्दा बोलाइएको छ जो राम्रो नाम निन्दा गर्ने हुन्छन्?
2:8 त्यसैले तपाईंलाई रीगल व्यवस्था परिपूर्ण यदि, धर्मशास्त्र अनुसार, "तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम पर्छ,"त्यसपछि तपाईं राम्रो.
2:9 तर तपाईं व्यक्ति favoritism देखाउन भने, त्यसपछि तपाईं एक पाप, transgressors रूपमा व्यवस्था गरेर पुन दोषी गरिएको होने.
2:10 अब जसले सारा व्यवस्था पालन गरेको छ, अझै एक विषयमा जो offends, सबै दोषी भएको छ.
2:11 उहाँले कसले भन्यो, "तपाईं व्यभिचार हुँदैन,"पनि भन्नुभयो, "तपाईं मार्न हुँदैन।" तपाईं व्यभिचार छैन भने त्यसैले, तर तपाईं मार्न, तपाईं व्यवस्था को एक transgressor भएका छन्.
2:12 त्यसैले बोल्न र तपाईं न्याय गर्न थालेका छन् बस रूपमा कार्य, स्वतन्त्रता को व्यवस्था द्वारा.
2:13 न्याय कृपा देखाउन छ जो उसलाई दया बिना छ. तर कृपा न्याय माथि नै exalts.
2:14 मेरो भाइहरूलाई, कसैले विश्वास गर्न दाबी भने के फाइदा छ, तर उहाँले काम छैन? विश्वास उहाँलाई बचाउन सक्षम हुनेछ कसरी?
2:15 एक भाइ वा बहिनी नाङ्गो छ भने र दैनिक खाना खाँचो,
2:16 र तपाईं को कुनै थिए भने तिनीहरूलाई भन्न: "शान्ति मा जानुहोस्, राख्न न्यानो र nourished,"र अझै तिनीहरूलाई शरीर लागि आवश्यक छन् भन्ने कुरा दिन छैन, के को लाभ यो छ?
2:17 त्यसैले पनि विश्वास, यो काम छैन भने, मरेको छ, र खुद.
2:18 अब कसैले भन्न सक्छ: "तपाईं विश्वास, र म काम छ। "मलाई काम बिना आफ्नो विश्वास देखाउनुहोस्! तर म काम मार्फत तपाईं मेरो विश्वास देखाउने.
2:19 तपाईं त्यहाँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास. तपाईं राम्रो. तर दुष्ट पनि विश्वास, र तिनीहरूले निकै डर.
2:20 त्यसैले त, तपाईं बुझ्न इच्छुक छन्, हे मूर्ख मानिस, काम नगरी विश्वास मरिसकेको छ?
2:21 थियो हाम्रो पिता अब्राहाम काम हालतमा जायज, वेदी मा आफ्नो छोरा इसहाकको भेटी द्वारा?
2:22 तपाईं विश्वास आफ्नो काम मिलेर थियो देख्नुहुन्छ, र काम विश्वासको हालतमा कि पूरा गर्न ल्याएको थियो?
2:23 र त धर्मशास्त्रको जो भन्छन् पूरा भयो: "अब्राहामले परमेश्वरको विश्वास, र यो न्याय निम्ति उहाँलाई प्रतिष्ठित थियो। "अनि त त्यो परमेश्वरको मित्र भनिन्थ्यो.
2:24 तपाईं एक मानिस काम हालतमा जायज छ भनेर के, र विश्वास द्वारा एक्लो?
2:25 त्यसैगरि पनि, राहाब, वेश्याले, त्यो काम गरेर जायज थिएन, को दूत अर्को तरिका मार्फत तिनीहरूलाई प्राप्त र पठाएर?
2:26 आत्मा बिना शरीर मरेको छ जस्तै लागि, त्यसैले पनि विश्वास गर्दछ बिना मरेको छ.
3:1 मेरो भाइहरूलाई, तपाईं धेरै छैन शिक्षकहरू बन्न चयन गर्नुपर्छ, तपाईं एक stricter न्याय प्राप्त गर्नेछन् भनेर थाह पाउँदा.
3:2 हामी सबै धेरै तरिकामा अपमान लागि. जो कोहीले शब्द अपमान गर्दैन भने, उहाँले एउटा सिद्ध मानिस छ. र त्यो त सक्षम छ, एक लगाम कस्न संग भने, वरिपरि सम्पूर्ण शरीर नेतृत्व गर्न.
3:3 त्यसैले हामी घोडाहरू को मुख मा bridles राख्न, हाम्रो इच्छा तिनीहरूलाई पेश गर्न, र त हामी आफ्नो सम्पूर्ण शरीर वरिपरि बारी.
3:4 पनि जहाज विचार, जो, उनि ठूलो हो र बलियो हावा द्वारा संचालित हुन सक्छ, अहिलेसम्म तिनीहरू एउटा सानो कर्ण संग वरिपरि गरिएका छन्, जहाँ पायलट को बल गर्नेछ सक्छ निर्देशित गर्न.
3:5 त्यसैले पनि जिब्रो पक्कै एउटा सानो अंश हो, तर यो ठूलो कुरा उत्प्रेरित गर्छ. एउटा सानो आगो ठूलो जंगल जल्दै गरेको सेट गर्न सक्नुहुन्छ कि विचार.
3:6 र त जिब्रो आगो जस्तै छ, सबै iniquity शामिल. जिब्रो, हाम्रो शरीर को बीचमा तैनात, सम्पूर्ण शरीर गंदा र हाम्रो Nativity को पाङ्ग्रा प्रज्वलित गर्न सक्नुहुन्छ, नरक देखि आगो सेट.
3:7 सबै जन्तुहरूसित चरा र र serpents र अरूको प्रकृति लागि शासन छ, र शासन गरिएको छ, मानव प्रकृति द्वारा.
3:8 तर कुनै मानिस जिब्रो शासन गर्न सक्षम छ, एक बेचैन दुष्ट, घातक विष को पूर्ण.
3:9 यसलाई हामी परमेश्वर पिताको आशीर्वाद, र यो हामी मानिसहरूको दुष्ट कुरा, जो परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको छ.
3:10 एउटै मुखबाट आशीर्वाद र सराप आय. मेरो भाइहरूलाई, यी कुराहरू त हुँदैन गर्नुपर्छ!
3:11 एक फोहरा फेंकना गर्छ, एउटै खोल्ने बाहिर, दुवै मीठो र तीतो पानी?
3:12 मेरो भाइहरूलाई, नेभाराको रूख उपज अङ्गुर गर्न सक्छन्? वा दाखको बोट, नेभारा? त्यसपछि न नुन पानी ताजा पानी उत्पादन गर्न सक्षम छ.
3:13 कसले बुद्धिमानी र तपाईं बीच राम्ररी सिकाइएको छ? उहाँलाई देखाउन गरौं, राम्रो कुराकानी को माध्यम द्वारा, बुद्धिको नम्रता आफ्नो काम.
3:14 तर तपाईं एक तीतो जोस पकड भने, र भने तपाईंको हृदयमा contention छ, त्यसपछि घमण्ड छैन र सत्य विरुद्ध फटाहा हुन छैन.
3:15 यो लागि बुद्धि छ, माथिबाट घट्दो, बरु यसलाई पार्थिव छ, beastly, र diabolical.
3:16 डाह र contention छ जहाँ लागि, पनि inconstancy र हरेक depraved काम छ.
3:17 तर माथि छ कि बुद्धि भित्र, पक्कै पनि, नैतिक शुद्धता पहिलो छ, र अर्को peacefulness, नम्रता, खुलापन, राम्रो छ के गर्न राजी, कृपा र राम्रो फल एक plenitude, न्याय छैन, falseness बिना.
3:18 अनि त न्याय को फल शान्ति बनाउन गर्नेहरूलाई द्वारा शान्ति मा छरिएको छ.
4:1 तपाईं बीचमा युद्ध र contentions कहाँबाट गर्छन्? यो देखि छैन: आफ्नो इच्छा देखि, आफ्नो सदस्यहरु भित्र जो युद्धमा?
4:2 तपाईं इच्छा, र तपाईं छैन. तपाईं डाह र तिमीलाई मार्न, र तपाईं प्राप्त गर्न असमर्थ छन्. तपाईं तर्क र तपाईं लड्न, र तपाईं छैन, तपाईं सोध्न छैन किनभने.
4:3 तपाईं सोध्न र तपाईं प्राप्त छैन, तपाईं नराम्ररी सोध्न किनभने, त्यसैले तपाईं आफ्नो इच्छा तिर यो प्रयोग गर्न सक्छन् भनेर.
4:4 तपाईं adulterers! तपाईं यस संसारमा मित्रता परमेश्वरको शत्रुतापूर्ण छ कि थाहा? त्यसैले, जसले यस संसारको मित्र परमेश्वरको शत्रु मा गरिएको छ हुन छान्नुभएको छ.
4:5 वा तपाईंले धर्मशास्त्रमा व्यर्थमा भन्छन् कि लाग्छ के: "तपाईं भित्र बसोबास जो आत्मा ईर्ष्या निम्ति कामनाहरु?"
4:6 तर उहाँले एक ठूलो अनुग्रह दिनुहुन्छ. त्यसैले उहाँ भन्नुहुन्छ: "परमेश्वरले घमण्डी resists, तर नम्र गर्न अनुग्रह दिनुहुन्छ। "
4:7 त्यसैले, परमेश्वरको विषय हुन. तर शैतानको प्रतिरोध, र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ.
4:8 परमेश्वरको नजिक, र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ. आफ्नो हात शुद्ध, तपाईं पापी! र आफ्नो हृदय शुद्ध, तपाईं duplicitous प्राण!
4:9 दुःख गर्न: शोक र रूनु. तिमीहरूको हँसी शोक मा बन्द गरिने, र शोक आफ्नो gladness.
4:10 प्रभुको दृष्टि मा नम्र हुन, र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ.
4:11 भाइहरूलाई, एक अर्को निन्दा गर्न छनौट छैन. जसले आफ्नो भाइ झूट, वा जसले आफ्नो भाइलाई न्यायाधीशहरूले, व्यवस्था र न्यायाधीशहरूले व्यवस्था झूट. तर तपाईं व्यवस्था न्याय यदि, तपाईं व्यवस्था को एक doer छैनन्, तर एक न्यायाधीश.
4:12 त्यहाँ एक lawgiver र एक न्यायाधीश छ. उहाँले नाश गर्न सक्षम छ, र उहाँले स्वतन्त्र सक्षम छ.
4:13 तर तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई न्याय गर्ने हो? यो विचार, भन्न जसले तपाईंलाई, "आज वा भोलि हामी शहर जानेछ, र निश्चित हामी एक वर्ष त्यहाँ खर्च हुनेछ, र हामी व्यापार गर्नेछ, र हामी हाम्रो लाभ गर्नेछ,"
4:14 भोलि के हुनेछ थाहा छैन कि विचार.
4:15 आफ्नो जीवन के हो को लागि? यो छोटो समयको लागि देखिने एक तुवालो छ, र त्यस पछि टाढा अचानक हराउनु हुनेछ. त्यसैले के तपाईं भन्न छ गर्नुपर्छ: "प्रभु विल्स भने,"वा, "हामी बस्नुहुन्छ भने,"हामी यो वा त्यो गर्नेछ.
4:16 तर अब तपाईंको अहङ्कारको मा रमाउनेछ. यस्तो सबै exultation दुष्ट छ.
4:17 त्यसैले, चिन्ने त्यो उहाँले राम्रो कुरा के गर्नुपर्छ, र यो गर्दैन, उहाँलाई लागि यो एक पाप हो.
5:1 ऐन अब, धनी छन् जो तपाईं! रुनेछन् र आफ्नो miseries मा wail, चाँडै तिमीहरूमा आउनेछ जो!
5:2 तपाईंको धन दूषित भएको छ, र आफ्नो लुगा moths द्वारा खाएको छ.
5:3 तपाईंको सुन र चाँदीको rusted छन्, र आफ्नो खियाले तपाईं विरुद्ध गवाही हुनेछ, र यो आगो जस्तै आफ्नो शरीर मा दूर खान हुनेछ. तपाईं अन्तिम दिन निम्ति आफैलाई लागि क्रोध माथि भण्डारण छन्.
5:4 आफ्नो खेत reaped गर्ने कामदारहरूको को भुगतान विचार: यो तपाईं द्वारा misappropriated गरिएको छ; यो बाहिर रुन्छिन्. र आफ्नो कराउँदै सेनाहरूका प्रभुको कान मा प्रविष्ट.
5:5 तपाईं पृथ्वीमा feasted छन्, र तपाईं सुखविलासमा आफ्नो हृदय nourished छन्, वध को दिन निम्ति.
5:6 तिमी नेतृत्व र बस एक जनाको मृत्यु, र उहाँले तपाईं प्रतिरोध गरेनन्.
5:7 त्यसैले, धैर्यवान हुनुहोस्, भाइहरूले, प्रभुको आगमन सम्म. किसान पृथ्वीको बहुमूल्य फल anticipates कि विचार, धैर्य प्रतीक्षा, सम्म उहाँले प्रारम्भिक र लेट वर्षा प्राप्त.
5:8 त्यसैले, तपाईं पनि रोगी हुनुपर्छ र आफ्नो हृदय बलियो हुनुपर्छ. प्रभुको आगमन लागि नजिक.
5:9 भाइहरूलाई, एक अर्को विरुद्ध गुनासो छैन, तपाईं न्याय छैन हुन सक्छ कि त. हेर, न्यायकर्तालाई ढोका अघि खडा.
5:10 मेरो भाइहरूलाई, भविष्यवक्ताहरूलाई विचार, जो प्रभुको नाम बोले, दुष्ट देखि प्रस्थान उदाहरणको रूपमा, श्रम, र धैर्य को.
5:11 हामी धैर्य धारण गरेका ती beatify कि विचार. तपाईं नौकरी को रोगी दुःखकष्ट सुनेका. र तपाईं प्रभुको अन्त देखेको छु, प्रभु दयालु र दयालु छ भन्ने.
5:12 तर सबै कुरा अघि, मेरा दाजुभाइहरु, कसम गर्न छनौट छैन, न स्वर्गमा द्वारा, न त पृथ्वी द्वारा, न त कुनै पनि अन्य शपथ मा. तर आफ्नो शब्द 'हो' हो गरौं, र आफ्नो शब्द 'कुनै' कुनै हुन, तपाईं न्याय अन्तर्गत पर्न सक्छ भनेर.
5:13 तपाईं कुनै पनि दुःखी छ? उहाँलाई प्रार्थना गरौं. उहाँले पनि स्वभावका छ? उहाँलाई भजनमा गाउन दिनुहोस्.
5:14 बिरामी तिमीहरूमध्ये कोही छ? उसलाई चर्च को पूजाहारीहरूले मा ल्याउन गरौं, र तिनीहरूलाई उसलाई प्रार्थना गरौं, प्रभुको नाम मा तेल उहाँलाई anointing.
5:15 र विश्वासको एउटा प्रार्थना गर्ने infirm सुरक्षित हुनेछ, र प्रभु उहाँलाई कम हुनेछ. र उहाँले पाप छ भने, यी उहाँलाई क्षमा गरिनेछ.
5:16 त्यसैले, एक अर्को आफ्नो पापहरू स्वीकार, र एक अर्को लागि प्रार्थना, तपाईं सुरक्षित हुन सक्छ भनेर. एक बस व्यक्ति को निरंतर प्रार्थना लागि धेरै कुरामाथि प्रबल.
5:17 एलियाले हामीलाई एक नश्वर मानिस थिए, र प्रार्थनामा उहाँले यो पृथ्वीमा वर्षा छैन भनेर प्रार्थना. र यो तीन वर्ष र छ महिना लागि वर्षा भएन.
5:18 र उहाँले फेरि प्रार्थना. र आकाश वर्षा दिनुभयो, र पृथ्वी उनको फल निस्कने ल्याए.
5:19 मेरो भाइहरूलाई, तपाईं को जो कोहीले सत्य देखि हराएका यदि, र कसैले उसलाई धर्मान्तरित यदि,
5:20 उहाँले पापी गराउँछ जसले आफ्नो मार्ग मृत्यु आफ्नो प्राण बचाउन हुनेछ त्रुटि बाट परिवर्तित गर्न भनेर थाह गर्नुपर्छ र असंख्य पापहरू कवर.